Kusho Ukuthini Ngempela “Ukumaketha Okuqukethwe”? | Martech Zone
ULwesibili, April 5, 2016 ULwesithathu, April 6, 2016 UCharlotte Ziems
Njengomuntu owenze umsebenzi wokuqukethwe ngokuqukethwe, ukuxhumana, nokuxoxa izindaba, nginendawo ekhethekile enhliziyweni yami ngendima “yomongo.” Esikukhulumayo — kungaba sebhizinisini noma ezimpilweni zethu uqobo — kuhambisana nezithameli zethu kuphela lapho ziqonda umongo womyalezo. Ngaphandle komongo, incazelo ilahlekile. Ngaphandle komongo, izethameli ziyadideka ukuthi kungani uxhumana nazo, ukuthi yini okufanele ziyisuse, futhi, ekugcineni, kungani umyalezo wakho uhlobene nazo.
Ukuhlela kabusha isibonelo esidala (nesicasula kakhulu) se-gaffe yomongo webhizinisi. Lapho into owake wayibuka esikhathini esedlule iqhubeka ikulandela kuze kube manje ukuthi usenesithakazelo noma cha. Ukubona isikhangiso samasokisi lapho ngibheka iwebhusayithi ngezinhloso zebhizinisi akungeni ndawo, ngakho-ke akunangqondo. Kepha amaphutha amaningi wokuqukethwe avela engxoxweni — lapho okuthile okushilo kuphumela ekubukekeni okungenalutho noma okudidekile, uyazi ukuthi kufanele unikeze umongo owengeziwe walokhu okushoyo noma okucelayo.
The Oxford English Dictionary ichaza igama elithi "umongo" ngale ndlela:
Izimo ezakha ukulungiselelwa komcimbi, isitatimende, noma umbono, futhi ongasebenza kuzo ngokugcwele kuqondwe futhi ihlolwe: isinqumo sithathwe ngaphakathi komongo we okuhleliwe ukunciphisa ukusetshenziswa kwemali
Izingxenye zento ebhaliwe noma ekhulunyiwe leyo ngokushesha sibandulele bese ulandela igama noma indima futhi cacisa incazelo yalo: ukucubungula amagama kuthinteka ngumongo lapho amagama avela khona
Ngakho-ke uma sisebenzisa incazelo yesimo kumkhuba wokumaketha, lapho “ukumaketha” kufaka phakathi ukuxhumana nomyalezo othile kuzethameli, khona-ke abathengisi kudingeka banake ngokucophelela lokho okwandulela noma okulandela ukulethwa kwemiyalezo yabo. Okungenani uma befuna izethameli ziqonde incazelo noma ukubaluleka kwalokhu abakukhulumayo.
At Isayithicore, sesize safuna ukuthi abathengisi nabaholi bedijithali bangaphatha ngempumelelo kuphela ulwazi lwamakhasimende lapho bemaketha ngokomongo wokuthi amakhasimende ahlanganyele kanjani nomkhiqizo wawo. Ukuhamba okuningi kokuzenzekelayo kokumaketha kwenza umzamo wokumaketha kokuqukethwe (isb., Uma amakhasimende alanda iphepha elimhlophe, incwajana ithunyelwa nge-imeyili kubo emasontweni amabili kamuva). Kepha inkinga ngamapulatifomu amaningi wokuzenzekelayo wokumaketha abheka kuphela ukusabela kwe-imeyili. Abacabangi ukuthi umsebenzisi angabe enze ini ngemuva kokulanda iphepha elimhlophe. Kuthiwani uma bechitha amahora kuwebhusayithi? Noma u-tweet ngephepha elimhlophe ngosuku olulandelayo? Ngeke uthande ukulandela ngokushesha okukhulu kunamasonto amabili?
Ukumaketha okuphumelelayo kokuqukethwe kudinga okungaphezu kwalokho okunikezwa yimishini yokuthengisa. Sikholelwa ukuthi kuthatha ubuchwepheshe obenza imisebenzi emithathu:
Amandla hlanganisa ubuhlakani besimo mayelana nokuthi izithameli zakho zenzani, noma ngabe zikuphi, ngaphambi ufinyelela kubo. Ngamanye amagama, njengoba i-OED isho, yini eyandulela ukudlula kwakho.
Amandla phatha okuqukethwe kwedijithali, noma indima uqobo lwayo. Futhi uma unamakhasimende amaningi, ufuna ukuqiniseka ukuthi ungakwenza lokhu ngezinga, kalula.
Amandla uhambise lokho okuqukethwe nomaphi lapho ikhasimende lakho lingaba khona, kunoma iyiphi idivayisi, ngendlela ezenzakalelayo ukuze izenzo ezithile zezithameli ezichazwe ngaphambilini zibangele ukulethwa kokuqukethwe. Futhi kwenzeka ngesikhathi esibekiwe osichazayo. Ngamanye amagama, ulawula lokho abakubonayo futhi lapho bekubona inqobo nje uma ubuhlakani bakho besimo mayelana nokuhlangenwe nakho kwabo kukutshela ukuthi bakulungele ukusebenzisa lokho okuletha.
Ilula impela, empeleni, kepha ubuchwepheshe obungenza ukuthi bube nzima buyinkimbinkimbi. Sibhale ngokukhangiswa kokuqukethwe encwadini entsha esanda kushicilelwa, ebizwa ngokuthi “Ukumaketha Okuqukethwe KwamaDummies. ” Sisebenze noWiley Press (oshicilela izincwadi ezidumile ze- “For Dummies” ozithola esitolo sezincwadi) ukuyakha, futhi ihlanganisa:
Bashintshe kanjani abathengi bedijithali nokuthi kungani okulindelwe kwabo kwemikhiqizo kuguquka
Ukumaketha komongo kukusiza kanjani ukufeza lokho okulindelwe ngumthengi
Okudingayo kubuchwepheshe bokumaketha ukuletha esithembisweni sokumaketha kokuqukethwe
Kukhona okuningi, kepha lezo yizindlela zokuthatha eziyisihluthulelo. Sithemba ukuthi uyayithanda, nokuthi ngikunikeze umongo owanele mayelana nencwadi ukuze ubone ukubaluleka kokuyilayisha. Ngemuva kwakho konke, makube kude nalokhu maketha kokuqukethwe ukuxhumana ngaphandle komongo. Ngazise ukuthi ucabangani ngale ncwadi kumazwana angezansi!
Landa ukumaketha kokuqukethwe kwamaDummies
Tags: umongoukumaketha umongoukumaketha kokuqukethwe kwama-dummiesukumaketha kwezimoDummiesindawowiley
As I-VP yeSayithicore Yokumaketha Okuqukethwe, Umhleli Oyinhloko, uCharlotte wengamela isu nokuhlelwa kwempahla yokuqukethwe kufaka phakathi ama-ebook, amavidiyo, namaphepha amhlophe ahambisana nawo futhi ahambise inani lamakhasimende akwaSitecore namathemba. Unentshisekelo yokuqonda izidingo nezinselele zababukeli njengoba ethanda ngeSitecore kanye nobuchwepheshe bezokumaketha.
Ngo-Apr 9, i-2016 ku-6: 45 AM
Isihloko esihle kakhulu, uCharlotte. Lokhu okuqukethwe kunikeza umbono ocacile wokuthi kuyini ukumaketha komongo nokuthi ungakuthatha kanjani ukumaketha kokuqukethwe uye ezingeni elilandelayo. Ngokuqinisekile sizolandela isixhumanisi bese ngabelana ngolwazi lwami ngemuva kokufunda le ncwadi.